Yusuf Garaad: Maxaabbiis Ajnebi ah
Maxbuus kasta mar gooni ah ayaan soo saarnay oo la marsiiyay nidaam uu ku qaato bug caafimaad iyo waraaqo uu ku dhoofo iyo weliba tikit.
Maxbuuska u dhashay dalka Senegal wuu sitay Baasabbor laakiin wuu dhacsanaa. Waxba ma ahaateen haddii uu dalkiisa toos u aadayo. Laakiin dayaaradda uu u baahan yahay in uu raaco si uu dalkiisa u tago wuxuu ka soo raacayay Paris.
Annaga oo adeegsaneyna magaca wanaagsan ee ICRC, waxay safaaradda Faransiiska ee Muqdisho ay noo oggolaatay in ninkani uu Paris sii maro isaga oo sita Baasabboor dhacsan.
Weriyaha Senegal iyo ciidanka Asluubtu isma jecleyn. Waxay ku tilmaami jireen nin aan run aqoon. Oo dhib badan, oo mar kasta ka cawda wax aan laga halleyn.
Waxaa mushkilad noqotay maalintii Saldhigga loo wareejiyay ee uu i weydiiyay aaway Kaameradeydii iyo lacagteydii? Lacagtu waxay ahayd lacag badan oo markaas kumanyaal dollar ah.
Arrintii markii la is weydiiyayna Xabsigu waa uu beeniyay. Wuxuu sheegay xabsigu in ninkaasi markii la soo xiray 10 sano ka hor wixii laga reebay oo dhan ay yihiin waxa hadda la guddoonsiiyay oo ay ka mid yihiin Baasabboorkiisii iyo waxyaabo yar yar.
Danjire iyo Maxbuus
Mushkiladdaas waxaa in badan ka dhib badnayd midda aan kala kulannay Maxbuuska ka soo jeeda Morocco.
Waa kii Saldhigga ka baxsaday. Magaciisa iyo sawirkiisa waxaa la dhigay Saldhig kasta oo booliis oo dalka ku yaalla.
Maalintii dambe taar ayaa ka soo dhacay Kismaayo. Booliiska Kismaayo ayaa sheegay in ay Maxbuuskaas gacanta ku dhigeen oo ay hayaan. Waxay u soo sheegeen Taliska Booliiska oo na soo wargeliyay.
Waxaa amar lagu siiyay in ay keenaan Muqdisho. Amarkaas ayay billaabeen in ay u hoggaansamaan. Laakiin halkii laga sugayay in ay yimaadaan ayaga oo Maxbuuskii wada ayaa waxaa soo dhacay taar kale. Intii ay waddada ku soo jireen ayuu Maxbuuskii mar labaad baxsaday.
Sidii markii hore oo kale oo kale ayaa mar labaad la billaabay baadi goob. Kiiskii Maxbuuska baxsadka ah oo awal Saldhigyada oo dhan lagu wargeliyay in uu xirmay ayaa hadda dib loo furay. Waxaa lagu wargeliyay xaaladda cusub. Iyaguna baaritaan ayay billaabeen aan lagu guuleysan.
Maalintii dambe ayaa Xafiiskeenna waxaa la soo xiriirtay Safaarad. Ballan ayay dhigatay. Markii uu yimid Danjiruhu, waxaa gaariga la saaran Maxbuuskii baxsadka ahaa Morocco.
Waxay noo sheegeen in uu safaaraddooda ugu tegey oo weydiistay in laga badbaadiyo ciidanka Soomaaliya oo uu laba jeer ka baxsaday.
Waan waan lala galay hey’ado badan oo kala duwan oo Dowladda ah, aakhirkii ninkaasi wuxuu ka mid noqday maaxaabiis aan midba mar ka dhoofiyay gegida dayaaradaha ee Muqdisho oo aan ku hubsaday in uu ka dhoofay dalkeenna.
Waxa aanan hadda xusuusan ninkii dhalashadiisa la garan waayay, oo dhowr dal looga dalbay dib u dejin in ay u suurta gashay iyo in kale.
Maxaabbiistaas in la sii daayo waxaa ka shaqeysay hey’adda ICRC, dhinaca Dowladda Soomaaliya waxaa suurta geliyay sii deyntaas Cabdullaahi Maxamed Maax oo macallin ka ahaa Kulliyadda Qaanuunka ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed.
Cabdullaahi wuxuu hore u noqday Wasiir ku Xigeenka Arrimaha Gudaha. Laakiin wuxuu mas’uul ka ahaa dhinaca Dowladda Soomaaliya is weydaarsiga Maxaabbiista Soomaaliya iyo Ethiopia.
Posted by Yusuf Garaad at 17:29:00